“Itoobiya ma waxay ku jirtaa qalalaasaha siyaasadda juquraafiyeed”? – Center for Advancement of Rights and Democracy (CARD)
Home › Forums › Waltajjii Dargaggoota › “Itoobiya ma waxay ku jirtaa qalalaasaha siyaasadda juquraafiyeed”?
June 20, 2022 at 12:41 am #4210 Reply
Qorto: Kalkidan Mulu Bitew*
Itoobiya ayaa afartii sano ee la soo dhaafay lagu tilmaamay inay ku jirtay “isbadal weyn” ay sabab u tahay dib u habaynta xisbiga talada haya iyo magacaabista ra’iisul wasaaraha hadda, Abiy Axmad Cali (PhD). “Isbeddelka” waxaa lagu qeexi karaa inu yahay waqti isbedello firfircoon iyo dhacdooyin xasaasi ah oo la soo maraayo isbeddello badan oo bulsho, dhaqaale iyo siyaasadeed.
Maqaalkan uu qoray Hagos Gebreamlak waxa uu u qornaa si uu u muujiyo xaaladda siyaasadda juqraafiyeed ee hadda jirta ee siyaasadda caalamka iyo tan gobolka ee Itoobiya, waxana uu ku sheegay xaqiiqooyin iyo cadaymo muujinaya in Itoobiya ay hadda ku jirto qalalaase siyaasadda juquraafiyeed oo ay hoos u dhacayso xidhiidhkeeda siyaasadda juquraafiyeed. Qoraagu waxa uu maqaalka ku soo bandhigay qodobadii ugu muhiimsanaa ee keenay in Itoobiya ay wakhtigan ku jirto qalalaase heersare ah. Qodobbada muhiimka ah ee la soo qaaday oo la falanqeeyay si loo soo gabagabeeyo waa qalalaasaha GERD iyo cadaadiska dibadda ee soo socda, Maraykanka oo u duulaya Indo-Pacific iyo Dhaqdhaqaaqa Gudaha ee Maraykanka, hoos u dhaca deymaha siinta Shiinaha ee Itoobiya, Faafida Coronavirus iyo dagaalkii Ukraine iyo Ruushka, Loolanka Siyaasadeed ee Gobolka iyo Nuglaanta Itoobiya, iyo Colaadaha Hubaysan iyo Degenaansho La’aanta.
Qoraagu wuxuu si qoto dheer uga hadlay xaaladda Itoobiya ee hadda jirta taasoo ka dhalatay xaaladaha caalamiga ah iyo xaalada gobalka ah labadaba. Maqaalka ayaa xiiso ii dhaliyay, in aan qoro qormo jawaab celin ah oo ka timid rabitaankayga ah in aan fahmo xaaladda dalkaygu marayo iyo sidoo kale jihada mustaqbalka ee uu qaadanayo.
Maqaalku waxa uu muujinayaa marxaladihii taariikhiga ahaa ee ay Itoobiya soo martay intii ay talada dalka dawladda cusub ayaa la wareegtay, iyo weliba heerkii ay dawladda cusubi ku wayday taageeradii ay ka heli jirtay Maraykanka iyo hay’adaha caalamiga ah ee maaliyadda. Aragtidayda ayaa ah, inu GERD yahay mid ka ah mashaariicda calanka ah ee laf dhabarta u noqon kara dib-u-habaynta dhaqaalaha Itoobiya. Waxaan ku raacsanahay doodda ah in joojinta gargaarka iyo taageerada ay ballan-qaadeen Mareykanka iyo hay’adaha maaliyadeed ee caalamiga ah ay si uun ula xiriirto buuxinta GERD sababtoo ah waddanka xafiiltama ee buuxinta GERD waa Masar, oo ah xulafada istiraatiijiga ah ee Maraykanka. Cabsida ay Masar ka qabto raad ku yeellasho gobolka ee Itoobiya waxa ay ka muuqatay in ay si degdeg ah u dhaqan galisay cunaqabatayn iyo tallaabooyin qallafsan oo Itoobiya cadaadis ku saaray. Xitaa haddii gargaarka iyo kaalmada shisheeye aysan waligood caawinin waddan Afrikaan ah, ka joojinta degdega ah ee waddanka ee barnaamijyada noocaas ah, gaar ahaan haddii dalku uusan leehayn kobcin awood dhaqaale iyo mid siyaasadeed si loo yareeyo dhaawaca degdegga ah ee cunaqabateyntan, waxay sii xumaynaysaa xaaladda. U adkeysiga dal madax-bannaan, gaar ahaan arrimaha qeexaya madaxbannaanida siyaasadeed iyo dhaqaale ee waddan, waa halbeeg muhiim ah; si kastaba ha ahaatee, kakanaanta ee siyaasadda calamiga ah iyo isku-tiirsanaanta dawladuhu, waxay keeni kartaa qalalaase siyaasadda juqraafiyeed, sida maqaalku ku doodayo, haddii aan si xeeladaysan loo qorshayn oo aan si fiican loo lafa gurayn. Maqaalku wuxuu sharxayaa in qalalaasaha GERD iyo cadaadisyo dibadda ah oo daba socda, iskahorimaadyada gaar ahaan dagaalka u dhexeeya TPLF iyo dawladda federaalku ay xumeeyeen xidhiidhka Itoobiya iyo reer galbeedka iyo hay’adaha caalamiga ah. In kasta oo ay tahay in aan wada xaajoodku u socon si aan lumino siyaasadeena, u diyaarsanaanta iyo tayaynta gudaha, iyo ilaalinta nabadda gudaha, waxa ay ahayd in mudnaanta la siiyo isla markaaba.
Dad badan ayaa ku doodaya in iyadoo deymaha faraha badan ee Shiinuhu uu siiyo dalalka Afrika ay u muuqdaan inay yihiin xal degdeg ah, waxay ka dhashaan masiibo dhaqaale oo mustaqbalka fog ah. Xitaa haddii aan ku raaco qiimaynta Hagos ee xiisadda siyaasadda juqraafiyeed ee degdegga ah iyo hoos u dhaca dhaqaalaha juqraafiyeed, ma rumaysni in ku tiirsanaanta amaahdu ay u horseedi doonto guulo dhaqaale oo mustaqbalka fog ah ee Itoobiya. 30ka bilyan ee deynta dibadda ah ee aan helnay ilaa hadda, halkii aan si istiraatijiyad ah diiradda u saari lahayn dhisidda xoogga dhaqaalaha maxalliga ah, waxay keentay in aan sii ahaanno qaran ku tiirsan ku tiirsanaanta. Waxaan aaminsanahay in daynta faraha badan ee taliska EPRDF uu helay oo uu ku guul daraystay inuu si sax ah uga faa’iidaysto uu wax ku darsaday in ka badan in loo diido amaahda Shiinaha. Anigoo ah qof ka soo shaqeeyay dhismaha waddooyinka, waxaan ka walaacsanahay in Shiinuhu uu yahay dalka ugu badan ee ka qaybqaata dhaqaalaha iyo khibradda labadaba ee dalka gaar ahaan mashaariicda kaabayaasha waaweyn ee aan hayno ilaa hadda sida aan u kuurgalay, ku tiirsanaanta Itoobiya ee aqoonta dibadda iyo shirkadaha dhismaha ee ajnabiga ah, ayaa ka hor istaagtay inay kobciso awoodda daneeyayaasha maxalliga ah ee qaran. Xitaa haddii aqoon wadaagga lagu sheego mid ka mid ah faa’iidooyinka keenista khubarada ajnabiga ah, waxaan shaki ka qabaa inay dhab ahaantii ka dhacayso dhulka.
Soo jeedinta dawldda cusub ee “Dib-u-habaynta Dhaqaalaha Gudaha” ee lagu beddelayo dhaqaalaha Itoobiya ayaa waxaa caqabad ku noqday faafitaanka caalamiga ah ee cudurka faafa ee coronavirus. Qaybta dalxiisku waxay u muuqataa mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee uu dawladda cusubi ku maalgalinayo oo uu fiiro gaar ah u leeyahay, laakiin masiibada faafitaanka caalamiga ah ee cudurka ayaa ku khasabtay waaxda dalxiiska adduunka in ay noqdaan kuwo aan firfircoonayn wakhtiga xaadirkan la joogo. Qormadu waxay sharraxday sida masiibadan cudurka faafa ee coronavirus u burburisay dhaqaalaheenna, waxaanan aaminsanahay in tani ay tahay mid xaqiiqo caalami ah anaa loo eegin kiis u gaar ah Itoobiya.
Hay’adaha Qaramada Midoobay ayaa ka digaya in sicir bararka ka dhashay dagaalka Ukraine iyo Ruushka uu uga sii dari doono cunno yarida Afrika.
GENEVA, April 26 (Reuters) – Madaxa Gargaarka ee Qaramada Midoobay Martin Griffiths, ayaa sheegay in ku dhawaad ​​2 Milyan oo Carruur ah ay qarka u saaran yihiin inay macaluul u dhintaan, xilli Geeska Afrika uu wajahayo mid ka mid ah abaarihii ugu xumaa ee soo mara muddo tobanaan sano ah.
Qeybo ka mid ah Kenya, Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa ku jira xaalad abaaro oo soo wajahday in ka badan 40 sano.
Madasha dhaqaalaha adduunka ayaa sheegtay in Afrika, inkasta oo ay leedahay 60% ee dhul-beereedka adduunka ay weli tahay midda ugu weyn ee cuntada soo dejisa. Ruushka iyo Ukraine ayaa 30% ka badan dhoofiya badarka caalamiga ah. Ruushka ayaa sidoo kale bixiya 13% bacriminta adduunka, halka Ukraine ay bixiso kala badh dhammaan saliidda gabbaldayaha.
Colaadda gudaha ee Itoobiya oo beeraleydii ka barakicisay dhulkii ay ku noolaayeen, una soo jeedisay dagaal iyo ilaalinta bulshadooda, ayaa sidoo kale hoos u dhigtay wax soo saarkii cunnada gudaha, taas oo ay weheliso cunto yari iyo khatartii ka dhalatay dagaalkii Ukraine iyo Ruushka, ayaa inoo horseeday dhibaatada taagan.
Sida ku cad qormada, waxaan ku raacsanahay in dhacdooyinka caalamiga ah ee aan la filayn, iyo sidoo kale xasaradaha bulsho iyo siyaasadeed ee maxaliga ah, ay sababeen in ay xidhiidh ki siyaseedda juqraafiyeed ee Itoobiya daciifto. Waxa aan diidanahay waa habka u muuqda inuu u soo jeedinayo Itoobiya inay aqbasho heshiisyo shisheeye. Qoraagu waxa uu soo jeediyay in dawladda Itoobiya ay heshiis laga gaadho buuxinta biyo-xidheenka. Taladan gaarka ah ee Hagoos soo jeediyay anigu kuma raacsani waayo waa mawduuc u baahan in si xeeladaysan loo lafo-guro maaha oo kaliya in xal degdeg ah la helo, balse sidoo kale marka la eego mawqifka dhaqaale iyo siyaasadeed ee uu mustaqbalka ina gelin doono.
Marka labaad gunaanadka qoraaga wuxu sheegaya in Itoobiya ay ka shaqeyso isu dheellitirnaanta xiriirka dibadda. Waqtigan xaadirka ah, ma jiro waddan go’doonsan, waxaana lagama maarmaan ah in dalalku si dhab ah u qiimeeyaan xiriirkooda dibadda si ay u ilaashadaan xiriirkooda ee siyaseedda juqraafiyeed. Sida dal madax-bannaan, heshiis kasta ama heshiisyo shisheeye oo aan galno waa loo bahanyay inay noqdaan kuwo mustaqbalka Itoobiya dani ugu jirto. Halkii aad mar walba u noqon lahayd xulafo aan dhaliil lahayn awood sare, waxa jirta ikhtiyaar aad ku noqon lahayd dawlad awood leh. Itoobiya waa in ay dejiso xeelado ay ku noqonayso dawlad xooggan oo ku aaddan siyaasadda caalamka iyo tan gobolka.
* Kalkidan waa Injineer ka qalin jabiyay oo xirfadeeda ay aha mid ay hadda si firfircoon uga qaybqaadanayso dhinacyada Horumarinta iyo Ganacsiga. Waxa ay ka qalin jabisay jaamacada Addis Ababa oo shahaado BSC ah oo ay ka diyaarisay cilmiga injineernimada madaniga iyo deegaanka oo hadda waxa ay shahaadada masterka ku diyaarinaysaa barashada Afrika (Qulqulka: Horumarka Aadanaha iyo Dhaqaalaha Afrika). Kalkidan waxa ay aad u xiiseesaa horumarinta ganacsiga Afrika, waxa ayna hadda ku lug leedahay shirkado gaar loo leeyahay oo kala duwan.
Reply To: “Itoobiya ma waxay ku jirtaa qalalaasaha siyaasadda juquraafiyeed”?